Floyd Mayweather vs. Logan Paul: ရန်ပွဲလား။ ဒါကဖျော်ဖြေရေးပဲ
Floyd Mayweather vs. Logan Paul: ရန်ပွဲလား။ "ဒါကဖျော်ဖြေရေးပဲ"
Floyd Mayweather vs. Logan Paul: တိုက်ပွဲကလား
ဒီပွဲဟာပြပွဲဖြစ်လို့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူး။ နောက်ကောက်တစ်ခုရှိနိုင်သည် သူသည်တက်တူးထိုးခြင်း၏အလွန်များပြားသောပမာဏကိုပေးလိမ့်မည်သေချာသည်။
Floyd Mayweather Jr. နှင့် Logan Paul တို့အကြားဒီတနင်္ဂနွေနေ့လက်ဝှေ့ပြပွဲ၏အယူအဆဟာဒီနေရာမှာထင်ရှားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကြောင့်မစတင်ခဲ့ပါဘူး။
ပေါလ်နှင့်သူ၏မန်နေဂျာ Jeff Levin တို့သည် Los Angeles ရှိ Paul's ဆင်ခြေဖုံးရှိအိမ်၏ကားဂိုဒေါင်တွင်ကြိုးဆွဲချနေခဲ့ကြစဉ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Levin သည် YouTube ကြယ်ပွင့်ပေါလုအား Mayweather ကိုတိုက်ချင်ပါသလားဟုမေးသောအခါအငြိမ်းစားအဝလွန်သည့်ချန်ပီယံဖြစ်သည်။ လက်ဝှေ့ထိုးနောက်ခံသည်အခြား YouTuber ( pro လိုမျိုး တစ်ခုဖြစ်သော) ကိုတိုက်ခြင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည့်ပေါလ်က Levin သည်လေးနက်မှုမရှိဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းနောက်ပြီး Levin ကစာချုပ်တစ်ခုပေးပြီး Paul က Las Vegas မှာရှိတဲ့ Mayweather ရဲ့အားကစားခန်းမမှာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှာ Mayweather နဲ့တွေ့ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။
၎င်းသည် YouTube နှင့် Instagram တွင်ပေါင်းစည်းထားသည့်နောက်လိုက် ၄၂ သန်းနှင့်အတူ
အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော Mayweather နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ လက်ဝှေ့သမိုင်း၌အမြင့်ဆုံး - စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲတွေအချို့၏။ သူ၏နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်သော
Conor McGregor ကိုဆန့်ကျင်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရူပီး ၄.၃ သန်းဝယ်ယူမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က၊ Manny Pacquiao ကိုတိုက်ခိုက်ရန် ၄.၆ သန်းဝယ်ယူခဲ့သည်။
ပြီးတော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာအငြိမ်းစားလက်ဝှေ့သမားတွေ၊ ဘောလုံးကစားသမားတွေနဲ့ကျော်ကြားတဲ့လူမှုမီဒီယာတွေပါ ၀ င်တဲ့နာမည်ကြီးအသစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာအားကစားပြက္ခဒိန်။
တနင်္ဂနွေနေ့ကဒ်မှာပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါရှိပါတယ်။အဟောင်း N.F.L. အကြား ARD ကစားသမားချဒ်ဂျွန်ဆင်နှင့်ဘရိုင်ယန်မက်စ်ဝဲလ်တို့နှင့်ပွဲတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည့် Mayweather သည်ပွဲချိန် ၅ ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည့်ပေါလ်ကို ၁ ဂိုးဂိုးမရှိဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလု။ သူတို့၏ပြပွဲသည်တစ်ပြိုင်တည်းတွင်
Showtime အတွက်ဝယ်ယူမှုကိုဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသော
နို ၀ င်ဘာလမှာ Mayweather နဲ့ Paul ဟာအမြတ်အစွန်းရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ အသက် (၁၀၅) နှစ် - (၈) ပွဲသရေကျခဲ့သည်။ ဒီပွဲမှာ Hybrid ဖြစ်ရပ်၊ လက်ဝှေ့ထိုးကတ်ပြားနှင့် hip-hop ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ဝက်ကိုလူမှုမီဒီယာဖွင့်လှစ်သူ Triller မှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ မြေအောက်ကဒ်တွင်ညီငယ်ဂျိတ်ပေါလ်ပါဝင်သည်Logan, အဘယ်သူ၏နောက်ကောက် N.B.A. ဆန့်ကျင်နောက်ကောက်လူမှုမီဒီယာကြယ်ပွင့် ကစားသမား Nate Robinson ကမီးမောင်းထိုးပြပြီးမရေမတွက်နိုင်သောမှတ်စုများကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။
ဒီတိုက်ပွဲကakeပြီလ Triller ကဒ်ပြားရဲ့အဓိကအဖြစ်အပျက်မှာအငြိမ်းစားရောနှောကိုယ်ခံပညာပြိုင်ဘက်တိုက်လေယာဉ် Ben Askren ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Jake Paul သည် Showtime နှင့်ဘက်စုံဆွေးနွေးမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး သူသည်ရောနှောကိုယ်ခံအားကစားတိုက်လေယာဉ် Tyron Woodley ကို နောက်လာမည့် box တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားချန်ပီယံဟောင်း Julio Cesar Chavez ဂျူနီယာကိုအငြိမ်းစားရောနှောကိုယ်ခံပညာဒဏ္Andersonာရီအန်ဒါဆင်ဆေးလ်ဗားကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ဇွန်လ ၁၉ ရက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Ultimate Fighting Championship ဥက္ကpresident္ဌ Dana White က UFC အနေနှင့်လည်းအလားတူတိုက်ခိုက်မှုကိုဗီတိုအာဏာ သုံး၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သော Georges St-Pierre နှင့် ၄၈ နှစ်အရွယ်အငြိမ်းစားလက်ဝှေ့သမား Oscar De La Hoya ။ ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့၊ "Game of Thrones" Haf ၏အင်အားကြီးချန်ပီယံနှင့်ကြယ်ပွင့်thor Bjornsson
ကိုစက်တင်ဘာအားကောင်းတဲ့ Eddie Hall ကိုစက်တင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ရာမှာကူညီပေးခဲ့တယ်။
Logan Paul ကတော့သူဟာတကယ့်စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောတယ် ဖော်ရွေသည့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း။ "ဒီကိစ္စဟာဝေဟင်ပစ်တိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုပေါလ် ၂၆ နှစ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ဝှေ့သမားတွေကဒီထုံးတမ်းစဉ်လာမဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များသည်အရင်းအမြစ်များကိုခေါင်းစဉ်တိုက်ပွဲများမှသွေဖည်သွားစေလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်လက်ဝှေ့သမားများကအားကစား၏ကျဆုံးမှုဟုထင်နေသောလက်ဝှေ့သမားများကပရောဖက်များထံမှဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေကဒ်အတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရသည့် Showtime Sports ၏ဥက္ကStephen္ဌ Stephen Espinoza ကသမိုင်းနှင့်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူဟာအသစ်အဆန်းဖြစ်ရပ်များဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိုဟာမက်အလီသည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့စဉ်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်နပန်းသမားတိုက်အန်တိုနီယိုကိုကီနှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်အားကစားသမားမဟုတ်သူများအား ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များကကြည့်ရှုသူများ။ ဤအဖြစ်အပျက်များမှမည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားလုပ်ငန်းကိုမှအားမလျှော့နိုင်ပါ။ Espinoza က "Mayweather-Paul ကဲ့သို့သောတိုက်ပွဲများသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတိုက်ပွဲများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအစားထိုးမည်မဟုတ်" သူကပြပွဲသို့ဆွဲဆောင်သောပရိသတ်များသည်အားကစားကိုပိုမိုနှစ်သက်သောသူများဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
"ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုမညစ်ညမ်းစေဘဲအရာရာကိုဘေးချင်းယှဉ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်" ဟုအက်စပီနိုဇာကပြောသည်။ သင်ဟာအဖြစ်အပျက်တွေကိုရောထွေးပြီးကိုက်ညီတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူအောင်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများမတူညီသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားစွာဆက်ဆံသင့်သည်။ "
Espino za မှပြောကြားချက်အရ Showtime ၏လက်ဝှေ့ပါဝင်မှုအများစုသည်လူရွှင်တော်များထံသို့ဆွဲဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေညတွင် Showtime သည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီး၏ပထမအပိုင်းကိုထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။
Roberto Duran, Marvin Hagler တို့အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုစစ်ဆေးသော Kings
", သောမတ်စ် Hearns နှင့် Ray Leonard ။ ကွန်ယက်၏ဇွန်လအစီအစဉ်တွင် Jermall Charlo နှင့် Gervonta“ Tank” Davis တို့ပါဝင်သောခေါင်းစဉ်တိုက်ပွဲများလည်းပါ ၀ င်သည်။
Even Triller သည်ဤကျော်ကြားသောလက်ဝှေ့ထိုးပြပွဲကိုစတင်ခဲ့သည့်ထိပ်တန်းလက်ဝှေ့ထိုးအဆင့်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်။ သူ၏ဇွန် ၁၉ လအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သည့်အဓိကတိုက်ပွဲမှာ Teofimo လိုပက်ဇ်၏ဂျော့ခ်ျကမ်မိုဆosဂျူနီယာအားဆန့်ကျင်။ ပေါ့ပါးသောခေါင်းစဉ်ကာကွယ်ရေးဖြစ်သည်။ သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကရက်ပ် Snoop Dogg ၏ဝေဖန်ချက်တွင်သူ၏နောက်ကဒ်သည်သက်တမ်းကြာကစားသမားဂျင် Lampley ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကဒ်ကိုင်တွယ်သူများသည် Badou Jack နှင့် Jean Pascal အကြားပေါ့ပါးသောခေါင်းစဉ်အတွက်သေသပ်စွာလက်ဝှေ့ထိုးပရိတ်သတ်များအားဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။ ပါစကယ်သည်ကြိုတင်မတိုက်ခိုက်မီ doping စစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်ပါ။ Jack သည် Dervin Colina အမည်ရှိဒေသခံပြိုင်ဘက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်အဓိကအာရုံစိုက်မှုနှင့် ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်အဓိကအဖြစ်အပျက်အကြောင်းပိုမိုပါ ၀ င်သည်။
Hard Rock တွင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအားကစားကွင်းသည်ပရိသတ် ၂၅,၀၀၀ သာကန့်သတ်ထားသည်၊ Mayewather Promotions ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Leonard Ellerbe ၏အဆိုအရထိုပွဲသည်တစ်အိမ်လုံးအပြည့်အ ၀ ဖြစ်သည်
"ဒါဟာသိပ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ပြပွဲတစ်ခုပဲ" ဟု Ellerbe ကပြောသည်။
၆ ရက်အတွင်း YouTube တွင်ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄.၅ သန်းကျော်ကို
မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြီးခဲ့သည့်လကပြုလုပ်ခဲ့သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Mayweather နှင့် Jake Paul တို့အကြားအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အားကစားပွဲများသို့မ ၀ င်ရောက်မီ။
ရန်ပွဲကိုယ်တိုင်ကအကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒေါ်လာသန်း ၂၅၀,၀၀၀ ဝင်ငွေဒေါ်လာသန်း ၂၅၀ ရရှိမည့်ပေါလ်သည်မက်လုံးများပိုမိုရရှိရန်
ရန်ပွဲသည်ထိတွေ့မှု ရှိ၍ မရှိပင်နည်းပညာပိုင်းအနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ တရားဝင်တရားသူကြီးများမရှိသောကြောင့်တရား ၀ င်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်သူကအနိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောရရင်မေဝေ ather ဟာသူရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုစုဆောင်းပြီးဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ အထိရနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ pay-per-view ဝင်ငွေ, ပိုမိုမြင့်မား, ငယ်ရွယ်ရှင်ပေါလုလာကြတယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ပေါလ်သည်အမှတ်ရစရာနှင့်ဝေမျှနိုင်သောအချိန်လေးများအရေးကြီးသည့်အွန်လိုင်းကမ္ဘာကိုလှည့်လည်သွားသည်။ ၎င်းသည် Mayweather ကိုမှတ်သားဖွယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက်သာသန့်ရှင်းသောထိုးနှက်ချက်တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
"Floyd ကငါမှားသည်ဟူသောအယူအဆကိုလောင်းသည်" အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်“ သူ့အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၌မကောင်းသောအရာကိုမျှော်လင့်ပါစေ။ သို့သော်လည်းငါသည်ကျွန်ုပ်သည်မကောင်းဟုမထင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုထင်သည်။ ”
Mayweather သည်အနိုင်ရသူမဟုတ်သော်လည်းတရားဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ။ သူ၏ Instagram feed တွင်သူ၏လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အသွေးတွင်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ဆယ်စုနှစ်ငယ်သောလူတ၏အမြန်။ သို့သော်သူကတနင်္ဂနွေနေ့တိုက်ခိုက်မှုသည်အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ၏အများပြည်သူလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်အချိန်၌စက်ရုပ်သည်အနည်းငယ်စက်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်
ပေါလ်သည်အရည်အချင်းရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည်ဒီရန်ပွဲအတွက် PR လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီး PR တွင် Pascal နှင့်ရံဖန်ရံခါစစ်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
သူကတိုက်ပွဲ ၂ ခုသာရှိသည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်ပါကပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ သူကအရမ်းအားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး cardio ကောင်းတယ်။ လူများအံ့သြသွားနိုင်သည်။ "
ပြီးတော့အမြင့်လည်းရှိတယ်။ Mayweather က ၅ ပေ ၈ လက်မရှိပြီးတရားဝင်ရန်ပွဲမှာ ၁၅၂ ပေါင်ထက်မပိုပါဘူး။ ပေါလ်က ၆ ပေ ၂ လက်မရှိပြီးပေါင် ၁၉၀ ကအလေးချိန်ရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံများတွင်အရွယ်အစားမညီမျှမှုသည်ပုံပန်းသဏ္looksာန်ရှိသည်။ လက်စွပ်တွင်ပေါလ်ကအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်။ပေါလုက၊ "အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက် boxing မှာအလေးချိန်အတန်းတွေရှိတယ်။
'sရာ၏နှစ်ဆမြင့်တက်ခြင်းက tadej pogacar အား de de france တွင်အားသာချက်တစ်ခုပေးနိုင်သည်
2021-06-20 16:40:32 | အားကစား...
အမျိုးသားပရော်ဖက်ရှင်နယ် peloton များသည်တင်းကျပ်သောခရီးဆောင်သေတ္တာများကိုထုပ်ပိုးပြီး Brest ရှိ 108th Tour de France စတင်ရန်ယခုအပတ် Brittany သို့ ဦး တည်နေစဉ်၊ အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲအတွက်အချိန်အတော်ကြာမဲဆွယ်စည်းရုံးသူများအား Tour de ၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်ဆုချခံခဲ့ရသည်။ ပြင်သစ်အမျိုးသမီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ...
Durant ၏ 'မြည်းကြီး' သည်ခြေဆွံ့သောဂိမ်း ၇ သည် Thriller ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသူသည် ot ထဲတွင်ပိုက်ထဲသို့ကျသွားသည်
2021-06-20 16:36:47 | အားကစား...
၁၅ နှစ်အတွင်းအချိန်ပိုတွင်ကစားရန် NBA ဂိမ်းကိုပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ်) သေဆုံးသည့်ဂိမ်း ၇ သည် Thriller သည်လက်မသို့ကျသည်။ ဘရွတ်ကလင်ကြယ်ပွင့် Kevin Durant အနည်းငယ်သာဝေးကွာသည်ဖြစ်စေ၊ စီးရီးအနိုင်ရဖို့သုံးမှတ်ထောက်ပြနှင့်အတူ NBA ကစားသမားအားဖြင့်အားလုံးအချိန်သတ္တမအမှတ်ပေးဂိမ်း။ CLUTCH. GAME7...
2021-06-20 16:21:33 | အားကစား...
ဗစ်တိုးရီးယားမြို့တော်သည်နောက်ဆုံးပေါ် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါလူစုလူဝေးများသည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ AFL ဂိမ်းများသို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အများပြည်သူ ၀ န်ထမ်းများကိုမဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ AFL နေရာများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာတစ်လရှိပြီဖြစ်သော်လည်းယခုတနင်္ဂနွေမှပြောင်းလ...
၂၀၂၀ တိုကျိုရှိဒမတ်စကတ် - ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များ၏အိုလံပစ်အားကစားခရီးစဉ်
2021-06-20 15:38:56 | အားကစား...
ကျွန်တော်တို့ကိုပွင့်လင်းဖို့ bryson dechambeau 'videobombs' ပြိုင်ဘက်ချောင်းရေကို koepka
2021-06-20 13:19:22 | အားကစား...
Bryson DeChambeau သည် Brooks Koepka နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ကြာသပတေးနေ့ကထပ်မံပေါ်ထွက်လာသော်လည်းသူ၏ပုံပန်းသဏ္aာန်သည်ထင်မြင်ချက်အားတုန့်ပြန်မှုမရရှိနိုင်ပါ။ ဂေါက်သီးသမားနှစ် ဦး သည်သင်၏ရှုမြင်ပုံပေါ် မူတည်၍ အားကစားကိုအားနည်းစေသောသို့မဟုတ်အားဖြည့်စေသောပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကအမေရိကန်ပြည်...
မူးယစ်ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုအတွက် Burrito အပြစ်တင်သူအပြေးသမားဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများစိုးစံ
2021-06-20 13:01:59 | အားကစား...
သူမ burrito အသားပေါ်တွင်အပြစ်တင် doping ပိတ်ပင်မှုကြားမှ Shelby Houlihan အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်နေရာတစ်ခုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အားကစားသမားများကညည်းညူ။ နောက်ဆုံးတွင်သူမကိုနှုတ်ထွက်ရန်မှာအမေရိကန်အိုလံပစ်အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်မှလာသည်။...
တိုကျို ၂၀၂၀ ခေါင်းဆောင်ကပရိသတ်ကိုအလိုရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာဆိုတိုက်တွန်းမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြ
2021-06-20 11:28:49 | အားကစား...
တိုကျို ၂၀၂၀ ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကdomestic္ဌသည်အိုလံပစ်အားကစားကွင်းတွင်အိမ်အကူပရိသတ် ၁၀, ၀၀၀ အထိခွင့်ပြုလိုကြောင်းနွေရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲသည် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုထပ်မံမြင့်တက်စေနိုင်သည့်အတွက် Sankei သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့သည်။...
အိုလံပစ်ချန်ပီယံ Simone Manuel သည်အမေရိကန်စမ်းသပ်မှုများတွင် ၁၀၀ မီတာအလွတ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ
2021-06-20 10:19:21 | အားကစား...
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိရေကူးစမ်းသပ်မှုများကြောင့်အကြီးမားဆုံးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သော်လည်းအိုလံပစ်ချန်ပီယံနှင့်နှစ်ကြိမ်အုပ်စိုးနေသည့်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆီမီးနူရယ်လ်သည် ၁၀၀ မီတာအလွတ်ပြိုင်ပွဲ၏ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့မတက်နိုင်ခဲ့ပေ။ ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်း။ တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲမှရက် ၁၀၀ အကွာ - အမေရိကန်အားကစားသမား ၂၅ ယောက်ကြည့်ရ...
ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုကို Matt Wilson သြစတြေးလျ၏အိုလံပစ်ရေကူးအသင်းထံမှနောက်ကျ reprieve ရရှိသည်
2021-06-20 10:10:56 | အားကစား...
Matt Wilson ကအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ roller coaster ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာသူဟာသြစတြေးလျရေကူးအသင်းအတွက်ရွေးချယ်မှုကိုလက်ခံဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးနောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့တိုကျိုအားကစားအသင်းအတွက်အသင်းမှာနေရာတစ်နေရာရစေခဲ့ပါတယ်။ သူလေးသည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင်သူသည် A...
တိုကျို ၂၀၂၀ စားဖိုမှူးသည်ပွဲကြည့်ပရိသတ်နှင့်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်နိုင်သည်
2021-06-20 10:09:23 | အားကစား...
တိုကျို ၂၀၂၀ စည်းရုံးရေးကော်မတီ၏အကြီးအကဲကသောကြာနေ့တွင်သူမသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပရိသတ်အားအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများကိုခွင့်ပြုလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မီဒီယာသတင်းများအရလူအများအပြားအားကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်းအန္တရာယ်အနည်းဆုံးမဖြစ်စေရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ ။...
Henley, Oosthuizen သည်သေနတ်ကြီးများဖုံးကွယ်သကဲ့သို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုကိုပထမအကြိမ်မျှဝေသည်
2021-06-20 09:58:25 | အားကစား...
Russell Henley သည်ကစားကွင်းတွင် US Open တွင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာကလပ်၌ပထမဆုံးအကြိမ်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သော်လည်းဂန်းဂိုးလ်၏အဓိကတတိယနေရာတွင်အားကစား၏အကြီးမားဆုံးကြယ်အချို့နီးကပ်လာသည်။...
ဂျပန်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများက covid-19 အိုလံပစ်အားခြိမ်းခြောက်မှုသတိပေး
2021-06-20 09:13:14 | အားကစား...
COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအတွင်းအိုလံပစ်အားကစားပွဲများကျင်းပခြင်းသည်ကူးစက်မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်ကြောင်းဂျပန်ထိပ်တန်းဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူများကသောကြာနေ့ကသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ပရိသတ်အားလုံးကိုပိတ်ပင်ခြင်းသည်အန္တရာယ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်စီစဉ်သူများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတိုက်ဆိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။...
Co- ခေါင်းဆောင် oosthuizen ယူနိုက်တက်ပြည်နယ်များအတွက်အကျွမ်းတဝင်နေရာတွင်ပြန်။ ပွင့်လင်း
2021-06-20 09:11:43 | အားကစား...
နှစ်ရှည်လများအဓိကပြိုင်ဘက်လူးဝစ်အိုosthuizenသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောမြေ၌တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့က Torrey Pines ရှိ US Open တွင်အမှောင်ကြောင့်ပထမအကြိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖောက်ထွင်းလိုက်သောတွင်းနှစ်ခုသည်ကျန်ရှိနေသေးသည်။...
တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားသမားများကအခမဲ့ကွန်ဒုံး ၁၆၀,၀၀၀ ကိုမသုံးရန်သတိပေးခဲ့သည်
2021-06-20 07:51:44 | အားကစား...
၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုစီစဉ်သူများသည် coronavirus ကပ်ရောဂါအတွင်းတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောဂိမ်းများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်အကြိမ်ကြိမ်ကတိပေးခဲ့သည်။ တိုကျိုမြို့တွင်ယှဉ်ပြိုင်နေသောအားကစားသမားများအားအန္တရာယ်ကင်းသောလိင် - သို့မဟုတ်ထိုကိစ္စနှင့်နီးစပ်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုတားမြစ်လိမ့်မည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ...
၂၀၂၀ တိုကျိုတိုကျိုအတွက်ပရိသတ်အတွက် အနည်းဆုံးအန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ရွေးချယ်စရာမရှိဟုကျွမ်းကျင်သူများကဆိုကြသည်
2021-06-20 07:19:25 | အားကစား...